एमालेले जे भन्छ, त्यो पूरा गर्छ – News Portal of Global Nepali
एमालेले जे भन्छ, त्यो पूरा गर्छ
14th July 2017 मा प्रकाशित
प्रभा बराल, मेयर राप्ती नगरपालिका
राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बराललाई अन्तर्वार्ताका लागि फोन गर्दा बेलुकीको खाना बसाउँदै थिइन् । बाँकी काम श्रीमान् हरि पौडेलले पूरा गर्छन् भनेर खाना बसाएपछि प्रभा अन्तर्वार्ताका लागि तयार भइन् । राप्ती मेयर पदका लागि प्रभा र श्रीमान् हरिको नाम सिफारिस भएको थियो । तर पार्टीले प्रभालाई टिकट दियो, उनले कांग्रेसका किरणभुषण ओलीलाई झन्डै दोब्बर मतअन्तरले पराजित गरेर मेयर जितिन् । यो जित कसरी सम्भव भयो ? नगर विकासका प्राथमिक योजना के छन् ? भन्ने विषयमा कुमार राउतले गरेको कुराकानी :
० जनताले तपाईंलाई जिताएका हुन् कि एमालेलाई ?
– एमालेलाई जिताएका हुन् । जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्ने राजनीतिक शक्ति एमालेको म प्रतिनिधि पात्र हुँ ।
० मेयर जित्नुभो, अब के गर्नुहुन्छ ?
– राप्तीका जनतामा समर्पित छु, मैले गर्नुपर्ने काम पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख छँदैछ । त्यसबाहेक जनताको सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् भनेर भोट मागेकी हुँ । उहाँहरूको सेवा गर्छु, सुख–दुःखमा साथ दिन्छु, विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासमा योगदान दिनेछु ।
० पहिलो काम के गर्नुहुन्छ ?
– वडा नम्बर ४ जुन पहाडी र विकट छ, त्यहाँ चेपाङ बस्ती छ । चेपाङ बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच पु¥याउनु मेरो पहिलो कर्तव्य हुनेछ ।
० विकास निर्माणको पहिलो काम ?
– विकास निर्माणका काम धेरै गर्नुछ, पिउने पानी, बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सिँचाइका समस्या छन् । दक्षिण क्षेत्र निकुञ्जसँग जोडिएको छ । निकुञ्ज हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हुनेछ । त्यस वरपर बस्ने नागरिकसँग लालपुर्जा छैन, जंगली जनावरको त्रास छ । यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
० महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने योजना छैनन् ?
– मैले अघि नै पनि भनें, पिछडिएका महिला र बालबालिकालाई स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच पु¥याउनुको साथै उनीहरूको आर्थिक र चेतनास्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछु ।
० चुनाव सजिलै जित्नुभयो ?
– त्यति कठिन भएन, किनभने यो क्षेत्र एमालेले २०४३ सालदेखि आफ्नो सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा विकसित गरेको छ । यहाँका जनताप्रति एमाले नतमस्तक छ । जागृतप्रसाद भेटवालदेखि सुरेन्द्र पाण्डेसम्मका नेताले राजनीति गर्नुभएको ठाउँ हो यो ।
० पार्टीले तपाईंलाई नै किन रोज्यो त ?
– नेतृत्व दिन सक्षम छ भन्ने देख्यो होला । म जनताको कामप्रति समर्पित छु, निःस्वार्थ रूपमा काम गर्छु । सक्ने काम गर्ने प्रयास गर्छु । जनताको काम सकिनँ भने नमस्कार गर्छु र माफी माग्छु ।
० कहिलेदेखिको एमाले तपाईं ?
– गर्भे कम्युनिस्ट हुँ, हामी कास्की बैदामका हौं, बुबाले पुष्पलालको समिपमा रहेर काम गर्नुभयो । शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभयो । घरमै सेल्टर थियो, जीवराज आश्रित, वामदेव गौतम सेल्टरमा बस्नु हुन्थ्यो । दाइदिदीसँगै म पनि जनताको गीत गाउँथे । ०४२ सालमा प्रारम्भिक कमिटीको सचिव भएर विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएकी हुँ । पिएन क्याम्पस पढें, विद्यार्थी नेता, महिला संघ, कास्कीको अध्यक्षसमेत भएँ । जनवादी विवाह भयो, त्यसपछि चितवन आएँ । प्रदेश ३ र नारायणी अञ्चल कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको स्थायी समितिमा छु ।
० बुबालाई कसले कम्युनिस्ट बनाएछ ?
– शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक विद्रोहमा उहाँको लगाव थियो । दलितलाई हेप्ने, जातीय छुवाछूत तथा समाजमा धनीले कमजोर वर्गलाई हेप्ने प्रवृत्तिको उहाँ विरोध गर्नुहुन्थ्यो । त्यस्तै बेलामा पुष्पलालको सामीप्यमा रहेर काम गर्न थालियो भन्नु हुन्थ्यो । उहाँ गण्डकी अञ्चलको वाममोर्चाको नेतृत्वले लिएर जनआन्दोलनमा होमिनु भएको थियो ।
० दाइदिदीहरू पनि राजनीतिमै हुनुहुन्छ ?
– उहाँहरू अहिले शुभचिन्तक मात्र हुनुहुन्छ । राजनीतिको मूलधारमा हुनुहुन्न, उहाँहरूको आफ्नो व्यापार व्यवसाय छ ।
० जनवादी विवाह कसरी गरिन्छ ?
– उहाँ अर्थात् हरिप्रसाद पौडेल हामी एउटै पार्टीमा थियौं । एउटै पार्टीमा हुनुको नाताले हाम्रो भेट विवाहअघि पटक पटक भएको थियो । कार्यक्रमकै सिलसिलामा शान्ता मानवीले हामी दुईको विवाहको प्रस्ताव गर्नुभयो । अखिल महिला संघका साथीहरूले पनि विवाह गर्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो । त्यसपछि समसा खाएर, मुठी कसेर, भाषण गर्दै हामीले विवाह ग¥यौं ।
० को कहाँ भनेर सोधीखोजी गर्नुपरेन ?
– सामान्य सोधखोज त भइहाल्यो नि । उहाँको मामाघर पोखरा बैदाममै थियो, यतिको केटोसँग विवाह गरियो भने भविष्य चल्छ, जिन्दगी बिताउन सहज हुन्छ, राजनीतिबाट हात धुनु पर्दैन भन्ने लागेरै विवाहको प्रस्ताव स्वीकार गरेकी हुँ ।
० जिन्दगी बिताउन सहज भयो त ?
– अहिलेसम्म भइरहेको छ, भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न । दुई सन्तान हुन्, ठूलोले यो वर्ष इञ्जिनियरको अध्ययन सक्छ, छोरी पनि इन्जिनियर नै पढ्दै छिन् । सब ठीकठाक चलेको छ, सन्तुष्ट छु ।
० दुवै सन्तान इन्जिनियर बनाउनु भएछ ?
– के पढ्छौ भनेर हामीले कहिले सोधेनौं, उनीहरूको इच्छाअनुसार हामीले पढ्ने वातावरण मात्र बनाएका हौं ।
० महिलालाई राजनीति गर्न सजिलो छैन होला ?
– पुरुषको तुलनामा सजिलो छैन, जनताको कुरा सुन्ने, योजना बनाउनेदेखि लिएर घरव्यवहार सञ्चालन र चुलोचौकोमा समेत दृष्टि पु¥याउनुपर्छ । त्यति गर्दा पनि समाजले के भन्ला भनेर लोकलाजको ख्याल राख्नुपर्छ । समाजमा पुरुषवादी चिन्तन हाबी छ, परिवारको साथ र सहयोग भयो भने धेरै सहज हुन्छ ।
० पुरुषवादी चिन्तन हटाउन सकिँदैन ?
– सचेतनाको वृद्धिसँगै पुरुषवादी मानसिकता विस्तारै हट्दैछ । समाज परिवर्तन एकैचोटि हुँदैन, क्रमिक रूपमा हुँदै जाने हो । एकैचोटि हटाउन खोजियो भने दुर्घटना हुन्छ । डिभोर्सको संख्या एक्कासि बढ्नु एउटा उदाहरण हो ।
० कुनै काम गर्न श्रीमान्ले सल्लाह दिनुहुन्छ कि दबाब ?
– आफूले कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सल्लाह अथवा दबाब ठाने पनि राम्रो कामका लागि नै उहाँले भन्नुभएको भन्ने ठान्छु ।
० एमाले सपना बाँड्ने पार्टी हो भन्नेहरूलाई तपाईंको जवाफ ?
– सपना देख्नुपर्छ, कल्पनाशील हुनुपर्छ, तब मात्र मान्छेले नयाँ काम गर्न सक्छ । परम्परागत कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले डो¥याउने हो भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन । हाम्रा अध्यक्ष केपी ओलीले जे भन्नुभएको थियो, त्यो अरुका लागि सपना भयो, तर त्यही कुरा आज पूरा हुँदैछ । रेल आउँदैछ, लोडसेडिङ सधैंका लागि अन्त्य गर्ने विकल्प खोजिँदैछ, पेट्रोल र ग्याँस उत्पादनको प्रयास भइरहेको छ ।
० कांग्रेस चाहिँ कस्तो पार्टी हो ?
– प्रजातन्त्रको नाम घोक्ने, नेतृत्व अप्रजातान्त्रिक बन्ने, परिवर्तन हुन नचाहने, परिवर्तनले डो¥याउनुपर्ने खालको पुरातनवादीहरूको राजनीतिक संगठन हो ।
० माओवादी केन्द्र नि ?
– जंगलमा बसेर आएका हुुनाले त्यही किसिमको व्यवहार गर्ने, जे कुरामा पनि जबर्जस्ती गर्नुपर्ने, जनतालाई खुसी पार्नु नपर्ने, डरधम्की प्रयोग गर्ने एकल नेतृत्वमा चलेको राजनीतिक दल हो ।
० नेकपा एमाले चाहिँ ?
– प्रगतिशील, परिवर्तनको पक्षधर राजनीतिक दल हो । त्यही भएर जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ नम्बरको पार्टी बनाए ।